Google Photos will no longer offer unlimited free photo storage. ﻿
Google Photos will no longer offer unlimited free photo storage.
Google Photos တွင် အကန့်အသတ်မဲ့ free photo storage ကို ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သော Google Photo ဟာ ယခင်က unlimited upload များကို ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင်တော့ သူတို့ရဲ့ storage policy အပြောင်းအလဲများကြောင့် ထိုသို့ ပေးအပ်သွားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Google မှ Twitter တွင် တင်ထားခဲ့သော tweet တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့တာကတော့ “အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းစွာပဲ Google Photos သို့ ဓါတ်ပုံအသစ်များ ၂၈ ဘီလျံခန့်ကို အပတ်စဉ်တိုင်း upload ပြုလုပ် နေကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ အမှတ်တရများကို ပိုမို၍လက်ခံသိမ်းဆည်းသွားနိုင်ရန်နှင့် အနာဂါတ်၏ Google Photos ကို တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ storage policy အပြောင်းအလဲများကို ကြေငြာပေးလိုပါတယ်။” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Tweet အတွင်း Google မှ ပြောဆိုခဲ့ရာတွင် သူတို့ရဲ့ လူသုံးများသော app များဖြစ်ကြတဲ့ Gmail, Google Drive တို့နှင့်အတူ ခွဲဝေအသုံးပြုရမည့် storage - 15GB အထိကိုသာ ခွင့်ပြုပေးသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသာ ပေးအပ်ထားတဲ့ storage space ထက်ပိုများတဲ့အရာများကို သိမ်းဆည်းလိုပါက Google ရဲ့ storage plan များကို အခကြေးငွေပေး၍ ဝယ်ယူသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဇွန်လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတိုင်မှီ upload ပြုလုပ်ထားမည့် ဓါတ်ပုံများကိုတော့ အဆိုပါ user limit တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းပြုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟူ၍ သိရှိရပါတယ်။